ဗီအေအက်စ် ဗီအေအက်စ် (VAS=Value-added service)ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ထင်ရှားသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတို (SMS) ပို့ခြင်းနှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းထက် ပိုသော အခြားဝန်ဆောင်မှုများကို အကြမ်းအားဖြင့် ဗီအေအက်စ် ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့် ဗီအေအက်စ် ဝန်ဆောင်မှုများကို သက်သာသော (သို့) အခမဲ့ နှုန်းထားများသတ်မှတ်ထားသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်း ဝန်ဆောင်မှုများသည် တစ်နည်းအားဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း များ၏ ပင်မလုပ်ငန်းဖြစ်သော ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုကို တန်ဖိုးတက်စေပြီး အသုံးပြုသူများ၏ ဖုန်းသုံးဆွဲမှုများပြားလာပြီး အသုံးပြုသူ တစ်ဦးခြင်း၏အကြမ်းဖျင်းအမြတ်ဝင်ငွေ(ARPU) ကို တိုးပွားလာစေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်အချိန်များက စာတိုပို့ခြင်း (SMS) (MMS) နှင့် အင်တာနက် ဒေတာ(Data) အသုံးပြုခြင်းတို့ကို value-added services များအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင်မှု ၎င်းတို့အား ပင်မဖုန်းဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်လာကြကာ ဗီအေအက်စ် မှပယ်ဖျက်လာခဲ့ပါသည်။
ရုရှားနိုင်ငံရှိ အချိန်ဇုန်များ Asia/Ulan Ude wasatime zone identifier from the zone file of the tz database. The reference point was Ulan-Ude. It was added in tz version 2011e.
ဟော်တင်ဟို ၂၂၉ လေယာဉ် ပထမဆုံးသော H.IX V1နမူနာပုံစံစက်မဲ့ဂလိုက်ဒါအား ၁၉၄၄၊ မတ်(၁)တွင်ပျံသန်းခဲ့သည်။ ရလဒ်များကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်လေယာဉ်မှူးက လေယာဉ်အပြင်ဖက်ထွက်နေသော ကိရိယာတပ်ထုပ်တန်းကို ပြန်မသိမ်းဘဲ ဆင်းသက်ရန်ကြိုးစားရာ မတော်တဆဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်းကိုဟော်တင်ညီအစ်ကိုထံမှ Gothaer Waggonfabrikသို့ပေးအပ်ခဲ့သည်။ Gotha အဖွဲ့က ပြောင်းလဲမှုအချို့လုပ်ခဲ့သည်။ တွန်းကန်အားထိုင်ခုံတစ်ခုထပ်ထည့်သည်။ dramatically changed the undercarriage to enableahigher gross weight, changed the jet engine inlets, and added ducting to air-cool the jet engine's outer casing, so as to prevent damage to the wooden wing.
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းသည် ခေတ်မီဆက်သွယ်ရေးစနစ်များဖြင့် လုပ်ငန်းများ တိုးတက်ပြောင်းလဲ ဖြစ်ထွန်းအောင် ဆောင်ရွက်နေသည့် နည်းတူ "လုံခြုံ၊ မြန်ဆန် ၊နွေးထွေး" ဆိုသည့်ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများအား တိုးတက်ကောင်းမွန်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးစွမ်းနိုင်အောင်လည်း ဦးတည်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများ၌အော်တိုအိတ်ချိန်းနှင့် အဝေးဆက်ကြောင်းသစ်များ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း၊ မိုဘိုင်းလ်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း ၊MPT Satellite Terminal များအပါအဝင် ခေတ်မီကျေးလက်တယ်လီဖုန်းစနစ် များ တည်ဆောက်တပ်ဆင်ခြင်း ၊အများပြည်သူသုံးတယ်လီဖုန်း ၊ဖက်စ်နှင့် အီးမေးလ်လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။ ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ(Value Added Services) အဖြစ် Password နှင့် GSM Mobile SMS (Short Message Service) တို့ကိုလည်း တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၀ မှစ၍ IT For Youth(လူငယ်များအတွက်သတင်း အချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ)အစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံတစ်ဝန်း သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ ကဏ္ဍများကို လည်းတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။